BAARLMAANKA ITOOBIYA OO SHEEGAY IN MACALUULI DALKA KA JIRTO | Deegaanka News
ADDIS ABABA – Guddi gaar ah oo ka kooban xubno baarlamaanka Itoobiya ah ayaa dhawaan soo maray goobo ka mid ah gobolada ay abaaruhu ku dhufteen.
Gudiga ayaa warbxintiisa ku sheegay in ay soo ogaadeen waxyaabo aad looga naxo. Waxaa ay warbxintu sheegtay in ay jiraan caqabado weli hortaagan baranaamijka dawladu ku taakuleyneyso dadka baahan.
Waxaayabaha gudigu ka deyriyey waxaa ka mid ah biyo iyo cunto yaraan; daawada oo gabaabsi ah iyo hawlaha gargaarka oo an nidaamsaneyn. Sidoo kale, waxa ay gudigu soo ogaadeen in calafka xoouhu uu aad u yar yahay.
Warbxintan oo saaka lagu baahiyey wargeyska TheReporter ayaa waxaa kale oo lagu sheegay in gudigu ogaadeen in masuuliyiinta gobolada iyo degmooyinka dalku kala soocan dadka gargaarka loo qaybinayo arrintan oo tilmaameysa in bulshada loo kala eexdo.
Warbxinta oo aad u gaabneyd ayaan lagu xusin meelaha iyo gobolada ay gudigu booqdeen iyo taloobooyinka dawladu ka qaadi karto xaqiiqda la soo ogaaday.
Warka naxdinta leh ayaa ku soo aaday xili dawladu la tacaaleyso kacadoon siyaasedeed oo gobolo badan oo dalka ah ka jira. Gadoodka Oromiya ka jira iyo qaybo gobolka Axmaarda ah ayaa caqabad ku noqon kara qaybinta gargaarka.